musha / Trading / Forex Tools
Iva nemichina yakakodzera iripo yekuita basa
PaFXCC taenda kunzvimbo dzakakura kuti tive nekushandisa zvakakosha uye zvakanyanyisa zvidzidzo zvekutengesa zvishandiso. Takabvunzana nenyanzvi; kunze, mumba uye zvakakosha zvikuru neyanyanzvi vedu vanokosha-vatengi vedu, kuitira kupa urongwa huwandu, huchawedzera kune zvombo zvevatengi vedu patinotengesa misika.
Ichi chinokosha chekudzidzisa zvichange chine zvakawanda zvemazuva akawanda zvakasarudzwa nevatengi vachaziva pamwe nekuwedzera pane zvimwe zvitsva. Icho chinodiwa chinokosha chevatengesi vakawanda vane ruzivo; kenduru yezvemari, inosanganiswa nekuwedzera kwekuwedzera; rakasiyana-siyana FX mutengesi widgets. Zvisinei, kushandisa kendenderedzwa yakadzokororwa semuenzaniso, inoratidzira hutano hwekutarisirwa uye tsanangudzo yatakapinda, kuitira kupa vateereri vedu zvinhu zvakanakisisa zviripo.
Tine chokwadi chokuti zvishandiso izvi zvichapa mukana wevatengi vedu kukudziridza unyanzvi hwavo uye saka tinakidzwa nehuwandu hwekutengeserana hunobudirira. Chimwe nechimwe chishandiswa chakasarudzwa kuti chine zvikamu zvakananga kuti zvigone kubatsira zvakasiyana.
Zviri pachena kuti iyo inonyanya kukosha yekutengesa midziyo yevatengesi nevatengesi vanofanira kuchengetedza pakombiyuta yavo, kana kuti vasunungure zvachose pane imwe tate pamakombiyuta avo. Ikonda yeFXCC yezvehupfumi inogona kuve yakagadziriswa kuti ienderane nezvinodiwa nevatengesi zvavanoda.
Kuziva kuti vazhinji vevatengesi veFX vakamira sei vanogona kuva vanokosha pakuita zvisarudzo pamusoro pekutungamira kwemari maviri.
Ichi chiratidzo chekutaura, chakavakirwa makore ezvakaitika kare zvakagadziriswa, inobvumira vatengesi firiji kuti vatengesi vataure pasi rose.
Nemaawa emusika kazhinji achichinja, somuenzaniso, semigumisiro yeBritish nguva yezhizha, zvinokosha kuti vatengesi varambe vakasvinurira nguva chaiyo yekutengesa, saNew York, yakazaruka.
Sezvo hutungamiri hwebhangi hwekuda kwehurumende zvisarudzo zvakabudiswa nevatengesi vanofanira kunge vachiziva zviyero zvese pasi rose, kunyanya kubva kumabhanki makuru anotarisira mari huru yakadai se; USD, GBP, EUR, YEN.
FX yemari inoshandiswa inouya nenzira mbiri dzakasiyana; technically and fundamental analysis. Vatengesi vanogona kushandisa kusanganiswa kwezvikamu zviviri, kuitira kuti vaite zvimwe zvisarudzo zvekutengeserana
Kuchengeta pamusoro pezviitiko zvemashoko uye kubudiswa kwemashoko chinhu chakakosha chekutengeserana kubudirira. Zvisinei, kuparadzanisa nhau, kuongorora kwekwenyanzvi, kuongorora kwepfungwa uye maonero zvinopawo ruzivo rwakakosha mune magetsi anotungamirirwa.
Cherechedza munguva chaiyo zvinyorwa kubva kuEECN, iyo magetsi yakagadzirwa netambo, kuti yedu yakananga kuburikidza nekushandura inoenderana nemirairo. Izvi zvakasanganiswa kuparadzirwa kwemashoko, zvakabatanidzwa semubva we interbank FX basa, rinoita kuti vatengi veFXCC vapiwe yechokwadi, yakanakisisa yemari yemari iripo 24 / 5.
Nhamba yedu ye calcul calculator inopa basa rinokosha re "reckoner" service. Kana uchida kuverenga: kuverenga usayizi wepasiti, chengetedza marongerwo aunoda iwe, unofanirwa kufunga nezvekukura kwemajenya akakodzera, ipapo uwandu huno hwekuverenga huchabatsira.